भियग्रा जतिनै यौनक्षमता बढाउछन् यी खानेकुरा ले — यौन शिक्षा Bishwa Ghatana
भियग्रा जतिनै यौनक्षमता बढाउछन् यी खानेकुरा ले
प्रायः उमेर बढेसँगै पुरुषहरु आफ्नो यौन जिवनलाई पुनर्जिवित गर्नका लागि यौनवर्धक भियग्राको सेवन गर्ने गर्दछन् । उमेर ढल्किएकाहरुले मात्र होइन आजकल त लामो समयसम्म यौन सम्पर्क तथा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने बहानामा तन्नेरीहरुमा समेत भियग्राको प्रयोग बढिरहेको छ । तर यस्ता धेरै खानेकुराहरु छन् जसको नियमित रुपमा सेवन गर्नेहो भने भियग्राको आवश्यकता पर्नेछैन । यी सुपरफुडले पुरुषमा यौन क्षमता बढाउँदछन् । यौन क्षमता बढाइदिने केही सुपरफुड यी हुन्ः
१.चुकन्दरः चुकन्दरको सेवनले पुरुषहरु यौन सम्पर्कका बेला उच्च प्रदर्शन गर्न सक्दछन् । चुकन्दरको सेवनले यौनांगमा रक्त प्रवाह बढ्दछ । साथै यसले सेक्स हर्मोनको पनि सन्तुलन कायम राख्दछ । यसले यौनेच्छा बढाउनुका साथै शिघ्रपतन रोक्न पनि सहयोग पूराउँदछ ।
२. प्याजः प्याजमा पनि विभिन्न प्रकारका पोषक तत्वले भरिपूर्ण हुन्छ । यसले कामेच्छा बढाउनुका साथै यौनांगलाई स्वस्थ राख्नमा सहयोग गर्दछ ।
३. पालुंगोः एमिनो एसिड तथा फोलेट तत्वले भरिपूर्ण पालुंगो नियमित रुपमा खानाले यौन क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । यसले यौनांग्मा रक्तप्रवाह बढाउन सहयोग गर्दछ ।
४. ब्रोकाउलीः ब्रोकाउली पनि यौनक्षमता वृद्धिका लागि अत्यावश्यक खाद्यपदार्थ हो । यसले रक्तप्रवाहलाई सन्तुलित बनाउने, न्यून रक्तचापको समस्या हटाउन समेत सहयोग गर्दछ ।
५. गाजरः भिटामिन ए ले भरपूर गाजरको सेवनले यौन क्षमता सजिलैसँग बढाउन सकिन्छ । यसले यौनेच्छा बढाउने, शिघ्रस्खलन कम गर्नुका साथै शुुक्रकिटको संख्या तथा गुणस्तर बढाउन पनि सहयोग गर्दछ ।
६. लसुनः कामेच्छा बढाउनका लागि लसुनले ठूलो भूमिका खेल्दछ । लसुनमा हुने तत्वले यौनांगमा रक्तप्रवाह बढाउँदछ र यौन क्षमतामा पनि वृद्धि गर्दछ ।
७. भिन्डीः भिटामिनका साथै जिंक लवणले भरिपूर्ण भिन्डीको सेवनले यौन समस्याबाट बचाउन सहयोग गर्दछ । जिंक तत्वको कमीले उत्तेजना नहुने समस्या अर्थात् इरेक्टाइल डिस्फंक्सनको समस्या ल्याउँछ जसलार्य भिन्डीको सेवनले हटाउन सकिन्छ । थकान हटाउन तथा यौन शक्ति बढाउन पनि भिन्डीको सेवन सहयोगी हुन्छ ।
८. गोलभेँडाः गोलभेँडामा हुने लियोपिन नामक यौगिकले पुरुषमा उत्तेजना नहुने समस्या हटाउन सहयोग गर्दछ र उत्तेजना बढाउँदछ । पुरुषमा हुने प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिम पनि गोलभेँडाको सेवनबाट कम गर्न सकिन्छ । – एजेन्सी
यौन जीवन खल्लो बन्नुको कारण
दाम्पत्य सुखको एउटा हिस्सा हो, यौन सम्बन्ध । स्वास्थ्य र सक्रिय यौन जीवनले दाम्पत्य जीवनलाई बलियो बनाउँछ । सुमधुर बनाउँछ । र, सुखी पनि ।
तर, यौन सम्बन्धका लागि एकजनाले मात्र इच्छा गरेर पुग्दैन । यसमा दुबैको समान सहभागी हुनुपर्छ, मानसिक तथा शारीरिक रुपले । यौन सम्बन्ध तब मात्र आनन्ददायक हुन्छ, जब दुबै पार्टनर त्यसका निम्ति तयार हुन्छन् ।
यद्यपी सधै यस्तो हुँदैन । कहिले कहिं पति/पत्नीमध्ये एकजनामा यौनइच्छा हुँदैन । पार्टनरले जबरजस्ती गर्दा उनीहरुबीच मनमुटाव हुन सक्छ । खासगरी महिलाहरु यौन सम्पर्कका लागि त्यती रुची राख्दैनन् । किन ?
यसको पछाडि केहि कारण हुन्छ । जस्तो कि, महिलामा हुने हर्मोनको परिवर्तनले पनि उनीहरुमा यौनइच्छा घट्न सक्छ । त्यसबाहेक केहि यस्ता आनीबानी हुन्छ, जसले यौन जीवनमा तगारो हाल्छ ।
शरीर तन्दुरुस्त नहुनु
शरीर स्वास्थ्य र तन्दुरुस्त छ भने नै, सक्रिय यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ । अक्सर यौन सम्पर्कका लागि शारीरिक रुपमा पनि तन्दुरुस्त हुनु आवश्यक छ । यसका लागि व्यायम गर्नुपर्छ । व्यायामले शरीरमा यस्तो हर्मोन प्रवाह गराउँछ, जसले भित्रैवाट खुसी पैदा हुन्छ । यदि तपाई व्यायाम गर्नुहुन्न भने, त्यसको असर तपाईको शयनकक्षामा पनि पर्छ ।
महिलाहरु घरको कामकाजमा व्यस्त रहन्छन् । त्यही कारण उनीहरु आफ्नै लागि समय पाउँदैनन् । घरधन्दाको चटारोले गर्दा पनि उनीहरु राम्ररी निदाउन पाउँदैनन् । यसले उनीहरुमा शारीरिक सम्बन्ध बनाउने इच्छा मर्दै जान्छ ।
डिहाइड्रेसनले पनि यौन इच्छामा कमी ल्याउँछ । पर्याप्त पानी वा झोलयुक्त पदार्थको कमीले शरीरमा डिहाइड्रेसन हुन्छ । त्यसैले यौन जीवन सक्रिय बनाउनका लागि पानी पनि पर्याप्त पिउनु आवश्यक हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : सेक्सले फाइदा कस्ता कस्ता बिरामीलाई गर्छ ?
छिटो छरितो भोक मेट्नका लागि बजारमा पाइने अस्वस्थ्यकर खानेकुरा खाइन्छ । अहिले जंकफूडको लत पनि धेरैलाई हुन्छ । यसले यौन जीवनमा असर गर्छ ।
सेक्स जीवनका दुश्मन
भनिन्छ, दम्पतीबीचको झगडा ओछ्यानबाट सुरु हुन्छ । अर्थात यौन जीवनले दाम्पत्यमा खास प्रभाव पार्छ । यौनले शारीरिक सन्तुष्टि दिन्छ, मानसिक तनाव कम गर्छ, साथसाथै दम्पतीबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँछ । तर, यौन जीवनमा तगारो ल्याउने केहि तत्व हुन्छन् । के छन् हुन् ति ?
यो पनि पढ्नुहोस :यौन सम्बन्धी अहिलेसम्मकै अनौठा ५ अध्ययन
पुरुषमा इरेक्शनको समस्या धेरै गंभीर मानिन्छ । यसले तपाईको यौनक्रियाका साथसाथै दाम्पत्य जीवनलाई पनि धराशयी बनाउन सक्छ । त्यसैले यसको निदान खोजिहाल्नुपर्छ ।
केहि अध्ययनमा पाइएको छ कि, गर्भनिरोध औषधीले महिलाको टेस्टोस्टेरन लेभल कम गर्छ । जसले महिलालाई यौन इच्छा हुँदैन । यो औषधी एस्ट्रोजनले बनेको हुन्छ, जसलाई लामो समयसम्म सेवन गर्दा यौन जीवन खलबलिन्छ ।
स्टबेरी- यो भिटामिन सीको राम्रो स्रोत हो, जसले पुरुषमा स्पर्म काउन्ट बढाउँछ । साथै यसले मुटु र धमनीमा रक्तप्रवाह पनि गराउँछ । यसलाई डार्क चकलेटमा डुबाएर सेवन गर्नुपर्छ, कामोत्तेजना बढाउँछ ।
बदाम- जिंक सेलेनियम र भिटामिन ईले भरपुर बदाम सेक्स बुस्टरको काम गर्छ । जिंकले सेक्स हर्मोन बढाउने काम गर्छ । भिटामिन ईले मुटुलाई स्वास्थ्य राख्छ ।
सेक्स किलर फुड्स
२. डाइट सोडा
४. कृतिम गुलियो
५. चिप्लो खानेकुरा
आन्दोलन थप उत्तेजित तुल्याउन नेपाल आएका भारतीयको प्रहरी द्वारा इन्काउन्टर
तीन महिनाको प्रतिबन्धपछि कप्तान मेस्सी अर्जेन्टिनी टिममा फर्किए
कांग्रेस नेता र सांसदबीच सडकमै हानाहान, सांसद घाइते